एक मजदुरको प्रश्न : सरकार म कहाँ जाउँ त?
एक मजदुरको प्रश्न : सरकार म कहाँ जाउँ त? ‘आफन्त काम नलाग्ने, कस्तो बिरानो सहर?’
ऋग्वेद शर्मा/निमेष जंग राई आइतबार, चैत ३०, २०७६, १६:३६
काठमाडौं- यो सहरमा व्यथा बनिरहेका कथाहरू धेरै छन्। दुःखका बेजोहरू त सधैँ हुन्छन् नै तर यो पटक अलि बढी नै पो भइरहेको हो कि। थातबास नभएकाहरू, गासको जोहो नभएकाहरू पनि छन् भन्ने देखिएको छैन कि देख्न आवश्यक छैन?
लकडाउनले धुलो नउँड्दा सडक जति चम्किएका छन्, लाग्छ यहाँ मानिसहरूको मन उति नै धमिलिएको छ। धुलो मडारिएर धुमिल मन भएका मानिसहरूमा आफन्त पनि काम नलाग्ने गरी सहर विरानो भएको छ। हुन त ‘लकडाउन सरकार’ भएका बेला नागरिकको मन पनि लकडाउनै त होला। होइन भने त एक मजदुरले यस्तो हन्डर खेप्नुपर्ने थिएन।
शनिबार रातको ९ बजेको हुँदो हो, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षअघि एउटा एम्बुलेन्स रोकियो। अस्पतालमा एम्बुलेन्स रोकिनु नौलो त भएन तर माइक्रो बसबाट यात्रु ओर्लिए जस्तै गरी एम्बुलेन्सबाट एक्लो बिरामी ओर्लिंदा दृश्य नमिठो थियो।
उनी बिस्तारै हिँड्दै इमर्जेन्सी कक्षतिर बढे। उनलाई त्यहाँ छाडेको एम्बुलेन्स फर्कियो। इमर्जेन्सी कक्षको ढोकामा पुगेका उनलाई सुरक्षा गार्डले रोके। उनीहरूबीच केही कुराकानी भयो। उनी त्यहीँ रोकिए।
तीन जनाको मेडिकल टिम ढोकामै आयो। थर्मल गन निधारमा लगाएर ज्वरो नापे। अक्सिजन स्याचुरेसन प्रोप औँलामा चेपेर रगतमा अक्सिजनको मात्रा र मुटुको धड्कन जाँचे।
हुन त अलिकति पैसा नै भएको भए पनि यतिबेला के गर्न सकिन्थ्यो र!
शनिबार राति त्यसरी एक्लै अस्पतालको इमर्जेन्सीमा आइपुगेका व्यक्ति हुन्– नारायण परियार।
ज्वरो सामान्य रहेको र अरु सबै ठीक देखिएकाले डाक्टरले ढोकैबाट उनलाई घर गएर आराम गर्न सल्लाह दिए। डाक्टरले एउटा कागजको चिर्कटोमा केही औषधि पनि लेखिदिएका थिए।
डाक्टरले घर जानु भने पनि रातको समय नारायण एक्लै घर कसरी जाने सोचेर पनि सक्ने स्थितिमा थिएनन्। न खल्तीमा पैसा छ, न त कसैलाई फोन गर्न मोबाइल। लगातार खोकिरहेका उनी सन्चो पनि थिएनन्।
गोरखा नाम्जुङका २७ वर्षका नारायणले काभ्रेमा एउटा विद्यालय भवन निर्माणमा मजदुरी गरिरहेको दुई महिना भयो। लकडाउन भएदेखि त काम ठप्प नै छ। काम रोकिएपछि ठेकेदारले पैसा दिएका छैनन्। भएको पैसा पनि सकियो।
केही दिनदेखि खोकी लागेर अस्वस्थ भइरहेका नारायणलाई चार दिनअघि त ज्वरो पनि देखियो। ज्यान तातेर आएका उनलाई के गर्ने कहाँ जाने भन्ने यकिन थिएन। यो समयमा ज्वरो आइदिँदा सबैको शंका ‘कोरोना लाग्यो’ भन्ने नै भयो।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को डरले नै ठेकेदारले एम्बुलेन्स बोलाएर उनलाई काठमाडौं पठाइदिएका थिए। अस्पताल जान भनेर एम्बुलेन्समा चढाइदिए पनि नारायणले खाली खल्ती अस्पताल जाने आँट गर्न सकेनन्। एम्बुलेन्सको पैसा त धन्न ठेकेदारले नै तिरिदिएका थिए।
जेठीसासूले भित्र पस्नसमेत नदिई पठाएको नारायणको मनले राम्ररी सोच्नसम्म भ्याएको थिएन। आफूलाई भएको के हो भन्ने डर उनको मनमा बढी थियो।
अस्पताल जान एम्बुलेन्समा बसिरहँदा उनलाई काठमाडौंमा भएका आफन्तहरूको याद आयो। कसले सहयोग गर्न सक्ला भन्ने सोचिरहेका उनको दिमागले सिधै अस्पताल जानुभन्दा जेठीसासूकोमा गएर केही सहयोग लिने सोच्यो। एम्बुलेन्स चालकलाई भने, ‘सामाखुसीमा लगेर झारिदिनुस् है।’
श्रीमतीको दिदीको कोठा सामाखुसी नै आफू जान मिल्ने सबैभन्दा नजिक र सहयोग मिल्ने ठाउँ ठानेका नारायणले त्यहाँ सहयोग पाएनन्। जेठीसासूले धेरै सोधखोज समेत नगरी ढोकैबाट एम्बुलेन्स बोलाएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाइदिएकी थिइन्। काभ्रेबाट खाली हात एक्लै अस्पताल पठाइएका उनलाई अन्ततः एक्लै अस्पताल नगई धर भएन।
जेठीसासूले भित्र पस्नसमेत नदिई पठाएको नारायणको मनले राम्ररी सोच्नसम्म भ्याएको थिएन। आफूलाई भएको के हो भन्ने डर उनको मनमा बढी थियो। अब के गर्ने भन्ने केही निक्यौलमा पुग्न नपाउँदै एम्बुलेन्स त्रिवि अस्पतालको इमर्जेन्सी अगाडि पुगिसकेको थियो। जहाँ ढोकैमा ज्वरो नापेर डाक्टरले घर गएर आराम गर्न भनिदिएका थिए।
डाक्टरले केही भएको छैन भन्दा जति खुसी पलाएको थियो, कमजोर शरीर लिएर अब कहाँ जाने भन्ने चिन्ता उति नै थियो। मनमा आएका अनेकौँ प्रश्न लिएर उनी अस्पताल अगाडिकै एउटा बेन्चमा थचक्क बसे। फेरि आफन्तहरूको लामो लिस्ट उनको सम्झनामा आइरहेको थियो। तर कसैलाई फोन गरिहाल्न साथमा मोबाइल पनि छैन। मोबाइल हराएको पनि हप्ता दिन पुग्न लागिसक्यो।
उनलाई एम्बुलेन्सबाट एक्लै झरेदेखि नै नियालीरहेका केही मानिसहरू नजिक पुगेर प्रश्न गरिरहेका थिए। कहाँ, के, कसोका अनेकौँ प्रश्नको जवाफ उनले झिँझो नमानी दिइरहे। उनको ‘अब म कहाँ जाने, के गर्ने केही थाहा छैन, यहाँ कोही छैन’ भन्ने वाक्यको प्रतिक्रिया के दिने वरपर भएका कसैलाई थाहा थिएन।
सबै कुरा भएपछि बाजेले भने– ‘यता ल्याएर राख्न त मिल्दैन, कोरोना लागेको हुनसक्छ, अस्पताल नै जानुपर्छ।’
त्यति नै बेला उनलाई याद आयो बाजे नाता पर्ने एकजना पुलिसमा हवल्दार छन्। नारायणलाई गोरखामा रहेकी श्रीमती, ती बाजे पर्ने हवल्दारको मोबाइल नम्बर याद थियो। नजिकै रहेका एक जनाले बाजेलाई फोन गरिदिए। लाउडस्पिकर बनाएरै कुरा भयो। सबै कुरा भएपछि बाजेले भने– ‘यता ल्याएर राख्न त मिल्दैन, कोरोना लागेको हुनसक्छ, अस्पताल नै जानुपर्छ।’
अघिसम्म सोधिखोजी गरिरहेका मानिसहरू पनि बिस्तारै परपर भए। रातको चकमन्न अँध्यारोले छोप्दै जाँदा नारायणको मनमा हुटहुटी उति नै बढिरह्यो। बाजेले त मिल्दैन भनि नै हाले अब के गर्ने त, दोधारको उपाय छैन।
उनको नजिकै रहेका अर्काले श्रीमतीको नम्बरमा गोरखामा फोन लगाइदिए। घरमा नै रहेका दाइसँग पनि कुरा भयो। दाइले फोनमा भनिरहेका थिए– ‘एम्बुलेन्स खोजेर गोरखा घरमा नै पठाइदिनु न तपाइँहरू मिलेर, आपतमा त्यहाँ सहयोग गर्ने कोही छैन।’
‘काठमाडौंमा तपाइँको कोही छ कि’ फोनमा यताबाट गएको आवाजपछि उताबाट दाइले भने– ‘यस्तो रातमा केही सोच्न सम्भव नै भएन। त्यहाँ सानीमा त हुनुहुन्छ, उहाँको नम्बर ...यो हो।’
केही बेरअघि बाजे पर्ने पुलिस हवल्दार र अघि घरमा फोन गरेजस्तै गरी फेरि सानीमालाई फोन गयो। नारायण परियार यहाँ विचल्लीमा हुनुहुन्छ भनेर कुरा गर्दा पहिले त सानीमाले चिन्दिनँ नै भनिन्।
नारायण आफैले भने- ‘माइला भन्नुभयो भने चिन्नुहुन्छ।’
‘हामी पनि अरुको घरमा बस्छौँ, यहाँ ल्याउन त मिल्दैन, तपाइँहरूले गोरखा पठाइदिनु न। हाम्रोमा घरबेटीले दिँदैन।’ सानीमाको त्यो बोली सुन्दा लाग्यो, ‘फोन लाउडस्पिकर नराखेकै भए हुने।’
तब नारायणको त्यो स्वरपछि सानीमाले नचिन्न त सकिनन् तर बोली चिनेजस्तो पनि हुन सकेन।
सम्झनामा काभ्रेबाट एम्बुलेन्स चढाएर पठाइदिने ठेकेदार पनि आएका थिए तर ठेकेदारको पनि त नम्बर याद छैन। दिन बाँकी पैसा पनि बैंकमा छ भन्दै ठेकेदारले दिएन। हुन त अलिकति पैसा नै भएको भए पनि यतिबेला के गर्न सकिन्थ्यो र!
अघिसम्म चिन्तामा रहेका नारायण सबैले परपर गर्दा एकछिन त रिसाए पनि। तर उनको दुःखको साथ रिसले कसरी दिनु। रातको १० नै बजिसक्यो। अस्पतालकै बेन्चमा त कसरी रात काट्नु। त्यसमाथि खोकि तारन्तर लागिरहेको छ। अघि डाक्टरले लेखिदिएको औषधिको कति पर्छ भनेर पसलमा सोध्नसम्म जाने आँट छैन।
एकजनाको फोनबाट फेरि गोरखामा रहेका दाइसँग नै कुरा भयो। बालाजुमा भाइको कोठामा गएर ताला फुटाएर बस्ने सल्लाह भयो। भाइले ताला लगाएर घर गएको कोठामा ताला फुटाएर पो कसरी बस्नु।
दाइले नै भाइको घरभेटीसँग फोनमा अनुनय गरे। ताला फुटाएर बस्ने अनुमति मिल्यो। नारायण जसोतसो हिँड्दै टिचिङबाट बालाजु गए। नपुग्दासम्म मनमा अनेक सवालजवाफ चलिरह्यो। आफन्तको असहयोगले नमिठो लागिरह्यो।
नारायणको परिवार गोरखा नाम्जुङमै छन्। आठ कक्षा पढेर छाडेका उनका दाइले वाइरिङको काम सिकेका छन्। गाउँमा त्यही काम गर्छन्। माइला नारायणले त तीन कक्षापछि पढेनन्। घर बनाउने कामतिरै हिँड्न थाले। एसएलसी पास कान्छा झोलामा आयुर्वेदिक औषधि बेच्दै हिँड्ने काम गर्छन्। बालाजुमा ताला फुटाएर माइला बसेको कोठा उसैको हो।
आइतबार बिहान अलि शान्तिको सास फेर्दै दाइले फोनमा नै सुनाए, ‘धन्न कान्छा भाइको घरबेटी भगवान जस्ता रहेछन् र माइलाले बस्ने ठाउँ पायो। होइन भने त राति कसैले बस्न नि दिएनन्, म कहाँ जाने भनिरहेको थियो, बिचल्ली हुन्थ्यो।’
नारायणसँग आइतबार बिहान पनि कुराकानी भयो। कान्छाले ६ किलोजति चामल किनिछाडेर हिँडेको रहेछ। त्यसले केही दिन त पुग्ला, त्यसपछि?
विपतमा आफन्तले नै सहयोग नगर्दा सहयोगको अरु सहयोगको आश पनि नारायणले सोचेका छैनन्। बरु कामै गर्न पाए हुने हो।
प्रधानमन्त्रीले कोही भोकै मर्नु पर्दैन भनेर भाषण गरेको पनि नारायणले सुनेका छैनन्। महानगरका बाँदर र कुकुरलाई खानेकुरा बाँड्दै हिँडेका मनकारी मेयर यहीँका हुन् भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन। हुन त आफन्त नै काम लागेनन्, सरकार त कहिले आफ्नो छ र!